Golaha Shacabka BFS Oo Si kulul uga Hadlay Tallaabadii Donald Trump ee Magaaladda Qudus + Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Golaha Shacabka BFS Oo Si kulul uga Hadlay Tallaabadii Donald Trump ee Magaaladda Qudus + Dhageyso
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul u hadlay tallaabadii Donald Trump Madaxweynaha Mareykanka ugu aqoonsaday in Magaalada Barakeysan ee Qudus ay tahay Caasimadda Maamulka Yahuudda.
Guddoomiye Jawaabi oo kulankii Xildhibaanada ee maanta ka hor jeediyay qudbad uu ku garab istaagayay qadiyada Muslimiinta Falastiin oo Caasimadooda loogu aqoonsaday iney caasimad u noqoneyso Taliska Maamulka Yahuudda ee heysta inta badan Magaalooyinka dhulkaasi.
Jawaari ayaa qudbadiisa waxa uu ku sheegay in Soomaaliya iyo Muslimiinta aysan marna gorgortan ka geli doonin in Quduz Caasimad ay u aheyd una ahaan doonto Shacabka iyo Dowlada Falastiin.
Jawaari ayaa intaasi ku daray in Magaalada Barakeysan ee Quduz ay mareyso waayaheedii ugu xumeyd isaga oona sheegay in go’aanka Mareykanka uu Magaaladaasi ugu aqoon Caasimada Yahuudda iney noqon doonto uu Mareykanka qaadan doono cawaaqib walbaa oo ka dhalata go’aankaasi.
waxaa uu sheegay in sumacada Mareykanka ay hoos u dhacday, madaxweynaha mareykankana ugu baaqay inuu ka laabto go’aan kaasi aan soo jiidan shucuubta Muslimiinta caalamka.
Madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Magaalada Barakeysan ee Quduz ay Caasimad u noqon doonto Maamulka Yahuudda, balse arintaasi ayaa waxaa ka carooday muslimiinta caalamka kuwaa oo gabi ahaan tooda si mideysan go’aan geesinimo leh uga qaatay arintaasi iney tahay mid lagu bur burinayo goobaha barakeysan, banaan baxyo dhiig ku daatayna ka dhigay caalamka oo idil.
Dhageyso:- codka Guddoomiye Jawaari oo dhameystiran